Qarax ismiidaamin ah oo kadhacay Muqdisho - Tilmaan Media
Qarax aad u xoog badan oo loo adeegsaday gaari ayaa kadhacay xero ay dagan yihiin ciidamo katirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo kutaala dhabarka dambe Garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ee degmada Warta Nabadda Ex Wardhiigley.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in qaraxa ugu yaraan ay kudhinteen 8 qof halka 14 kalana ku dhaawacmeen.Qaraxa ayaa waxaa loo adeegsaday gaari nooca loo yaqaan Noohada.
Wali majiraan wax warar faahfaahsan oo kasoo baxay dhanka dowladda Soomaaliya oo la xiriira qaraxa dhacay.
Muqdisho ayaa waayadan ka nasatay qaraxyadii faraha badnaa ee dhici jiray. Mucaaradka dowladda ayaa ku dooda in sababta qaraxyadu u yaraadeen aysan ahayn in Al-shabaab laga adkaaday ee ay sabab u tahay wadooyinkii magaalada oo lakala xiray.